Kale: ngesithombe sakho, igama, zokupheka
Kale, iklabishi noma Kale - kuyinto ezihlukahlukene engavamile iklabishi, okuyinto lakwazi ukugwema ukushintsha izakhi kanye ukufuywa. Phakathi kwempi yezwe yesibili ngo-France, abantu ekubulaweni yindlala futhi amavithamini ukulondolozwa artichoke. Ngesikhathi esifanayo e-England, hhayi yindlala kwasisiza amahlumela kuleli kilasi. Calais, kanye naseJerusalema artichokes, yazuza isihloko "yemifino ukhohliwe" iminyaka eminingi. Kulezi zinsuku, ibuyele sibonga ithebula yokudlela ethandwa, okuyinto ngenkuthalo lisetshenziswe amaqabunga ukulungiswa izitsha zabo.
Igama kwazalelwa indle
igama Kale has angaphezu kwelilodwa. Nokho-ke kubizwa ngokuthi indle (kugcizelelwa ilunga wesibili), brunkol, Kale, gryunkol. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi okuthiwa yemifino, kubukeka okufanayo noma kunjalo, amahlamvu akhe insephe kungaba onsomi noma oluhlaza tint, futhi musa yakha ikhanda. Yingakho egameni lesiLatini umkhiqizo umsindo Acephala noma Brassica oleracea, okusho "okuxekethile, eziqale ukuvela." Lokhu ezihlukahlukene has a high, ngezinye izikhathi ukufinyelela imitha elilodwa, kuba isihloko sesiqu, kusukela lapho zonke izinhlangothi alengayo eshiya diverge. Ososayensi bakholelwa ukuthi gryunkol uhlobo iklabishi zasendle eminingi yasendulo.
Kale uphatha sikhule ngisho nangaphansi kwezimo ezinzima kakhulu zezulu. Ngemva kokubhekana frost it is etholwe kuphela juicier kakhudlwana futhi abe mnandi kakhulu. EYurophu lehla ngokushesha inani Kale ngaphambi kokuphela Ephakathi wayengunkulunkulukazi othandwa kunabo yemifino oluhlaza. Amazwe amaningi bekwi ukutshalwa amaqabunga, kodwa ekugcineni esikhundleni nezinye izitshalo zemifino. Lapho lolu hlobo zikhunjulwe futhi ukuthi sasibhekwa ezingavamile, ikakhulukazi zindawo zethu.
Kodwa, noma kunjalo, akukho State uyazicabangela ngokwayo gryunkolya kudabuka. Iklabishi like kuwo wonke amazwe, kodwa yonke indawo bakholelwa amazwe kusuka kwamanye amandla. AmaJalimane shayela indle isiko French e-England kunenkolelo eyandile yokuthi ihlume zivela Scotland noma eSiberia, kodwa ngenxa Dutch yalo - "izifundo" German. E-United Kingdom nase-United States indle livela ngaphansi kwegama Red Kale Russian - Red Kale Russian. Bathi eMelika eshiya imikhumbi silethwe abathengisi abavela eRussia, ngemva kwalokho i-product ngokuqinile esezinzile California izingadi. ubudlelwane Trade phakathi Arkhangelsk futhi London bagqugquzela Ukuza wesibili ka indle eNgilandi.
Izinhlobo Kale iklabishi
Kale has izinhlobonhlobo eziningi:
ESiberia Kale - ezihlukahlukene linamandla okushisa aphansi kanye izinambuzane ezehlukene.
Trostyanaya - ukuphakama kwalo bangaba bade cishe amabili amamitha. Isici yalolu hlobo ukuthi has a stem bulky, ingasetshenziswa njengendlela idondolo.
Red Russian - has ezifanayo kodwa ngesikhathi esifanayo njengoba eSiberia, kodwa kusobala ukuthi libhekene khona emazombezombe amahlamvu ekhululekile abomvu.
Curly iklabishi - ezihlukahlukene ezivame kakhulu Kale (Kale). Kusukela nezinye izinhlobo ke izici ukunambitheka esithambile futhi amnandi. amahlamvu Culture ashwabene nokubukeka abacaphuni.
Iklabishi Redbor F1 kungenzeka amnyama onsomi noma obomvu umbala izikimu, ngakho lolu hlobo ngokuvamile sisetshenziswa kakhulu ukungadluliseli ezithile ithoni izitsha.
iklabishi Tuscan - kuyahluka side ishidi elincanyana kokuba isakhiwo esishwabene.
Prime iklabishi - ezihlukahlukene frost ezikhulayo.
Kungakhathaliseki ukuthi siyini ezihlukahlukene Kale (abacaphuni Kale), eshiya kangcono ukudla okuluhlaza, bangeze salads nge garlic abasha, utamatisi no basil. Ngakho, izindawo ezuzisayo isiko is ngcono kakhulu balondolozwa.
Ukwakheka brunkol iklabishi
Kale iqukethe amaminerali amaningi, i-folic acid, u-20% we-magnesium, i-calcium, ithusi kanye potassium. Kale, isithombe kungenziwa okuxoxwe ngazo kulesi sihloko, ahlanganiswe ngamavithamini A no-C Basuke etholakala cishe 50%. Ngo inombolo kancane encane isiko uqukethe amavithamini B1, B2, B6, no E.
Umkhiqizo, futhi vitamin K, okuyinto ebaluleke kakhulu umzimba womuntu. Provitamin A (i-beta-carotene) kubuye ingxenye kuso. Umkhiqizo iqukethe-85% we umthamo zonke izinsuku we ketshezi. eyikhulu amagremu iklabishi Kale has 28 kcal.
izakhiwo ewusizo iklabishi brunkol
Kale enezinto eziningi ezinye izimfanelo ezinhle, futhi kuyo okudingekile ukuze ikhule le zemifino. Umkhiqizo kusiza ukuqeda calcium ukuntula. Omunye igremu iklabishi elinabantu abangaba 1.35 angu lomcebo, kuyilapho inani elifanayo ubisi it has angu 1.13 kuphela. Calcium kusukela kule iklabishi amuncwa wumzimba ngo-25% ungcono calcium ubisi. Ukuze abantu abaphethwe ukungabekezelelani ukuba obisi, kwesihlalo kuyinto inqolobane eliyigugu i-calcium.
Ngenxa okuqukethwe lelitfutfukile Vitamin C, brunkol kubhekwe antioxidant esihle odabuka yemvelo. Okuphansi ikhalori Kale isiza kanjani ukulwa Kilos ngokweqile. Naphezu ikhalori okuqukethwe okuncane, yemifino ematisa ngokugcwele emzimbeni nge Eziningi zezinto ezidingekayo. Ngakho-ke, inyama kuthiwa kuhoxiswe isiko zanda Ukudla imenyu yabo.
Kale Kale kubhekwa izidakamizwa okungenakuqhathaniswa nokuvimbela umbono. Isiko ibizwa ngokuthi iNdlovukazi carotenoid, ngoba omunye umkhiqizo inkomishi iqukethe 200% yenani vitamin A.
Brunkol mbewu elimangalisayo izitsha eziningi. Curly Kale (zokupheka ngezansi) kungaba ingxenye isaladi noma isobho. Amaqabunga ayo amancane Kusukela kungenziwa kuphekwe zemifino isaladi okumnandi. Ukwakha ke kuyodingeka amahlamvu eziyisishiyagalombili elincane iklabishi, eziyikhulu amagremu feta ushizi, omunye ingilazi currants elibomvu (ugqumugqumu, raspberry, black currant, yamagilebhisi noma apula tincetu), a extra amafutha omnqumo okuncane, inkomishi eyodwa kwezine zawo quinoa, parsley, dill, onion eluhlaza ukunambitheka .
amahlamvu wageza ka Kale kufanele sibe yimichilo mncane. Khona-ke usike onion nemifino, isiswebhu in a blender amajikijolo. Berry puree ukuxubana ngosawoti, amafutha omnqumo kanye pepper. Manje, endishini uhlanganise oluthile lokudla, imifino, anyanisi kanye iklabishi uhlanganise isaladi ne berry sauce. Top isidlo Kunconywa ukuhlobisa izingcezu ushizi kanye amajikijolo asele.
Ukulungisa isobho nge iklabishi gryunkol kufanele ukulungiselela:
Eyikhulu ml ukhilimu.
Nendebe inkukhu noma yemifino umhluzi.
400 g uphizi simisiwe.
pepper White, usawoti.
"Weparmesan" wezipuni ezimbili ushizi vukuza.
Munye nobe mibili amahlumela ngesikele sokuthena of Mint.
Ezintathu noma ezine amahlumela ngesikele sokuthena of basil.
Amazambane nihlanze futhi uthathe nezixhobo ezinkulu. I izitsha ezimbili ubilise amazambane kanye uphizi. ukudla okuphekiwe sihlanganise namahlamvu oqoshiwe iklabishi umhluzi uphehle zonke blender. Ngo okhamiwe wahlanganiswa engeza oqoshiwe amahlamvu basil kanye Mint, weparmesan, ukhilimu wokhele esitsheni kancane isobho. Ukuvusa ngaso sonke isikhathi, siyazi kulungele isidlo imizuzu emibili. Pudding wakhonza nge-crackers.
Ngokuvamile, isiko landa lisuka imbewu abatshalwé ekhanyayo. imbewu Kale okufanele itshalwe phakathi kuka-Ephreli noma ekuqaleni kuka May, ukubekezelela kahle ukufakelwa. Ngakho-ke kakade balibangisa kusukela amahlumela enhlabathini kangcono ingamthinti. Temperature imbewu eningi kufanele kube degrees 50. Ukuze kahle ngamunye kuyadingeka ukwenza kancane humus kusukela izinkuni umlotha.
Very fast ezikhulayo Kale (Kale). Imbewu ziqhume ngosuku lwesihlanu nesikhombisa emva kokutshala. Ekhaya, isiko landa lisuka izithombo.
Ukuthenga iklabishi Kale, sinake isimo amahlamvu: kufanele iqinile futhi ziqinile futhi azinawo amabala amnyama. Gcina ku esiqandisini esikhwameni sephepha amasonto amabili. Uma ufuna ukulondoloza gryunkol eside ke ukukwenza efrijini esitsheni plastic.
Ngaphambi ukupheka iklabishi kungcono iphume futhi kususe sifanamsindvo.
Izimo adle indle
Iklabishi lokhu ezihlukahlukene iqukethe oxalates. Isamba ngokweqile emzimbeni kuholela izifo eziningana. Ngakho-ke, kusukela ukusetshenziswa sezinyawo kumelwe zilahlwe abagada abe esinyeni nenyongo noma ezinso khona.
USoya: Ukwakheka, sayinela ukungena izinhlobo. Izidlo kusukela soy. Ibubulo lokususa i-- kuyinto ...
Uwoyela Fish noma uwoyela krill? uwoyela Krill: izakhiwo ewusizo, izindlela zokusebenzisa, izimpawu kanye nokubuyekeza
Honeydew futhi ikhabe uju
Izithelo kumquat - kuyini? Njengoba kukhona kumquat? izakhiwo ewusizo kumquat
Kuyini capacitor, futhi ziyini
Indlela ukulungiselela samosa tandyrnaya: incazelo zokupheka